တန့်ဆည် သတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဝန်ကြီးတူမတွေနဲ ပြောထားတဲ့ နောက်ဆုံးရ သတင်းများ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » တန့်ဆည် သတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဝန်ကြီးတူမတွေနဲ ပြောထားတဲ့ နောက်ဆုံးရ သတင်းများ
တန့်ဆည် သတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဝန်ကြီးတူမတွေနဲ ပြောထားတဲ့ နောက်ဆုံးရ သတင်းများ
Posted by နတ်ဆိုးလေး on Mar 19, 2012 in Copy/Paste | 28 comments
Phyoemyat Thandar Myint သတင်းအမှား,လုပ်ကြံသတင်း,သူတပါးအားအပုတ်ချသောသတင်းသာဖြစ်ပါသည်
Phyumar Tun အဲ့ဒီနယ်ကိုကောင်းအောင်ဘယ်သူတွေကလုပ်ခဲ့တာလဲဆိုတာသေချပြန်စဉ်းကြပါ။သမိုင်းဆိုတာမေ့ကောင်းတဲ့အရာမဟုတ်ဘူး။
 Ak Taze နယ်ကို ကောင်းအောင်းဘယ်သူမှ လုပ်ပေးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရယ်လို့ မတွေ့ဘူးသေးဘူး အိပ်ကပ်ထဲ ထည့်တဲ့လူတွေပဲတွေ့ဘူးတယ်
Phyoemyat Thandar Myint NLD အမည်ခံထားတဲ့နိုင်ငံရေးသမား အတုအယောင်တွေ
Yesterday at 3:04am · Like · 1
Phyumar Tun နယ်ကိုကောင်းအောင်အဆင့်တန်းမှီအောင်ဘယ်မိသားစုကခေါင်းကောင်းပြီး၊စဉ်းစားပြီးလုပ်ခဲ့တာလဲဆိုတာအရင်ဆုံးကြိုးစားပြီးလေ့လာပါ။နေက်ပြီးအိပ်ထဲထည့်ခဲ့တဲ့လူနဲ့အိပ်ထဲမထည့်လူကိုခွဲခြားလေ့လာဖို့လဲလိုအပ်တယ်။အထူးသဖြင့်သူတို့တွေရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုအသေးစိတ်သိရအောင်လေ့လာကြပါ။မျိုးရိုးစဉ်ဆက်လေ့လာလိုရပါသည်။
Thuta Mg ဘာတွေများအဆင့်တန်းမှီပါလဲ တန့်ဆည်သား မဟုတ်ငြားသော်လည်း တန့်ဆည်ကိုချစ်ပါ၏ (တန်ဆည်သူများကိုလည်းချစ်ပါ၏ ဤကား စကားချုပ်) ဆယ်စုနှစ်တခုမျှနေခဲ့ဖူးပါ၏ ကျွန်ုပ်အပေါ်ဝယ်တန့်ဆည်၏ ကျေးဇူးလည်းရှိပေ၏ ဘုရားကြီးမှကြွေးပေးရန်ရှိ၏ဟုဝါးတားတားကြာခဲ့ဘူး၏ ဤသည်ပင်တိုးတက်ခြင်းပေလော ပြောပါဦးမည်ကျွနုပ်ခရီးတွေသွားခဲ့ဘူး၏ တန့်ဆည်မျှချာသောနယ်ကိုမတွေဘူး (စစ်ဖြစ်နေသော ပုံမှန်မဟုတ်သောနယ်များမပါ)ရောက်ဖူးသမျှနယ်များထဲကပေါ့ အရင်တုန်းကမည်မျှလုပ်ခဲ့သည်ကိုကျွန်ုမသိ အာဏာသည် လူကိုရူးစေ၏ အမတ်ကြီးလည်းအနည်းနဲ့အများရူးမည်မှာသေချာ၏ အာဏာပြမည်မှာသေချာ၏ ထို့ကြောင့်ဆင်သေကို ပုရွက်ဆိတ်ဖြင့်မဖုံးပါနှင့်
Thuta Mg သိစေချင်သည်မှာ ကျွနန်ုပ်သည် ပါတီမဲ့တယောက်ဖြစ်၏ ရှုပ်လှသဖြင့်ဘယ်ပါတီမှဝင်ရန်ဆန္ဒမရှိ ခုလည်းအပေါ်မှာရေးခဲ့သောစာကြောင့်ရည်စားနဲ့ ရန်ဖြစ်ရပေတော့မည် ဗေင်ဟောရန်ပင်မလို
Phyoemyat Thandar Myint ဖြူမာရေ ဦးနှောက်မရှိတဲ့ဟာတွေကို သွားပြောမနေနဲ့တော့ နားလဲမှာမဟုတ်ဘူး
Kyaw Moe အင်း သူခိုးကလူပြန်ဟစ်ဆိုတာ ဒါမျိုးထင်ပါရဲ့ မထူးပါဘူး ထင်တာမဟုတ် သေချာတယ် ငွေရှိတိုင်းထင်ရာစိုင်း လူတိုင်းဟာအမှားကိုယ်စီဆိုသော်လည်း အမတ်ကြီးအမှားကားကြီးလှသည်မဟုတ်လော
Aung Nyunt Oo ‎@ Phyoemyat Thandar Myint, Phyumar Tun and AK Taze,as per you all comments, i agree with u all that Tin Myint and family member who coutribute our Taze TS under Military government.But since u are living in shining and developed environment, i really wonder why u all could not differentiate what shoul be and what should not be.Besides, u all should not blame or misundersand all members of NLD especially Sayar U Myint Tun and Kyaw Shwe who are really great and noble guys who currently trying hard to encourage and advice villagers to vote EDUCATED PERSONAL who really could run and manage to our Taze Ts in order to be rich of stability and with rich of economic to refrain from poverty.If Tin Myint is really rich with political,economical knowledges,i am sure that he would not confront and talk nonsense to young members of NLD. You guys, if u really wish to know about true-file, u may call Mentioned no 075-49223 Attn: U Kyaw Shwe and ask whether the news is gossips or not. I do wish u guys to live with proper judgement.
Ak Taze ဒေါ်ဖြူမာ မျိုးရိုးစဉ်ဆက် လိမ်ခဲတဲ့ ခင်ဗျားတိုရဲ့ ကျော်မင်းမျိုးဆက် ဖွတ်နဂါးကို တန့်ဆည် တနယ်လုံးက နွေးထွေးစွာအကြွေးတောင်းဖို့စောင့်ကြိုနေကြပါတယ် ဒေါ်ဖြူမာ ..။ငွေကပ်လို့ လူရုပ်ပေါ်တာ ခွေးရုပ်မပျောက်ပါ ။တန့်ဆည်သူတန့်ဆည်သား လူအရှားသွားပြီ အရင်လိုထင်သလိုလိမ်လိုမရတော့ပါ..။ငွေအဆင်ပြေရင် အကြွေးဆပ်ဖို့တန့်ဆည်ကို တခေါက်လောက် ဆက်ဆက်လာခဲ့ပါဖြူမာ..။အိမ်ကုပ်ကလေးနဲ့ အုန်းခြံကြားက စက်စုတ်ကလေးလဲ အကြွေးရှင် သခင်ကိုမျော်နေရင်းနဲ့အခွန်မကြေးလို့ ဒေ၀ါလီခံရင်း အံတင်းစောင့်နေရတာ နှစ်ပေါင်းများစွာကြာခဲ့ပါပြီ မဖြူမာ ဆပ်နိုင်တဲ့တနေ့ အားမာန် အပြည်နဲ့ ကြိုးစားလည်ပတ် အကြွေးဆပ်ဖို့ အုန်းခြံခြေရင်း ခြုံဗုတ်အတွင်းက သခင်(အကြွေးရှင်းများ)ပြန်အလာ ကျိုးနွံ့စွာဖြင့် စောင့်နေပါတယ် မဖြူမာ .။ ပုံ …တန့်ဆည်သား (အကြွေးရ၇န်ရှိသူများ)
Ak Taze မလေအိုးကြိးရဲ. မသိရင်လည်းမေးကြည်.ဥိးဟဲ. နောက်ဆိုရင်ဒူဘိုင်းအကြောင်းပြောပြအုံးမယ်
Ak Taze တင်းတိန်ယံမှာ အခြေနေမကောင်း အကြွေးရှင်တွေ လိုက်တောင်းလို့ အကုင်္က္ကားကိုပြောင်းခဲ့တဲ့ နင့်အဖိုးရဲ့သမိုင်းငါတို့ကောင်းကောင်းသိခဲ့ပါတယ်မိဖြူမာ ဒေါင်ကြီးနဲ့ကျွန်းတောကုန်းမှာ လိမ်ထုတ်ခဲ့ပြီး စက်တွေတည်တိုက်တွေဆောက် လူရုပ်ပေါက်အောင် ခွေးရုပ်ပျောက်ဖို့ ဟန်လုပ်ခဲ့တဲ့နင့်အဖိုးကို ငါမမေ့သေးပါဘူးမိဖြူမာ…..ဖြူမာရေ နင့်တို့ကဆိုင်ကယ်ကိုစီးကျောင်းကြီးတက်တဲ့ အချိန်မှာ ကန်သင်းရိုးကြား ရိုးပြတ်များကိုဖိနပ်မပါခြေဗလာနဲ့ ပုဆိုးစွန်တောင်လူရုပ်မပြောင်တဲ့အောက်ခြေတန်းစား တို့များ ဘ၀ကို မြင်ကြည့်စမ်းပါမိဖြူမာ….။ငါ့သမီးလေး ဒူဘိုင်းရောက်ဖို့အရေး နင့်ရှာခိုင်းတဲ့ သိန်းလေးဆယ်တွက် ကုန်းပေါင်လယ်ရောင်း ငွေတိုးတောင်းပြီး ငါ့ပေးခဲ့တယ်မိဖြူမာ..။ရန်ကုန်ခေါ်သွား တိုက်ခန်းထားပြီး သင်တန်းကြေးတောင်း ငွေရှစ်သောင်းဆိုလို့ ငါ့ထပ်ဆောင်းပေးခဲ့ရတယ်ဖြူမာရေ…..ဒူဘိုင်းမရောက် ငုတ်တုတ်စောင့်ရင်း ရွာပြန်ခဲ့တဲ့ ငါ့သမီးအား ရွာသူရွာသား ပျက်လုံးတွေကြား စိုးရွံ့အားငယ် လူဘုံလယ်မှာ ခေါင်းမဖေါ်ရဲအောင် နင်လုပ်ရက်တယ် မိဖြူမာ…။တော်သေးသပ မိဖြူမာ သိန်းလေးဆယ်သုံး လူကုန်ကူးဖို့ နင့်ရဲ့အကြံ ငါတို့အမြန်သိလို့ သမီးမရှုံး ငွေဆုံးသော်လည်း သမီးကညာ ရွာရောက်လာလို့ ကျေးဇူးတင်တယ် မိဖြူမာ….။ တောသူတောင်သား ငါတိုများတော့ စက်ပိုင်သူဌေး ကျော်မင်းမြေးဆိုပြီး ယုံစားလို့အပ်နှံ ဖာမခံခဲ့ရတဲ့ ငါ့သမီးလို နင်တုိ့မဖြစ်ပါစေနဲ့လို့ ငါဆုတောင်းနေတယ်….မိဖြူမာ ။ “ သမိုင်းဆိုတာ မေ့ကောင်း တဲ့အရာ မဟုတ်ဘူးလို့“နင်ပြောခဲ့လို့ နင်တိုရဲ့သမိုင်းရိုင်းခဲ့တယ်ဆိုတာတန့််ဆည်မက မြန်မာသိအောင် တစ်စွန်းတစ ဖော်ပြလိုက်ပါတယ် …မိဖြူမာ..။ ပုံ ….ဒူဘိုင်းမရောက်သမီးရှင်.. သမိုင်းကြောင်းများ ဆက်ရန်ရှိပါသေးသည်…။
Ak Taze ၀င်းမြင့်တူမ ဂွကျကျ ဖြူမာထွန်းသို့ ရည်ညွှန်းပါသည်..။
Ak Taze ဒေါ်ဖြူမာ ကျွန်တော်ကို ခင်းဗျားကြိက်သလောက် စော်ကားချင်းစော်ကားပါ အမေနဲ့ nld ပါတီ ကိုတော့ စော်ကားမော်ကားမလုပ်ပါနဲ့ ကျွန်တော် လုံးဝသည်းမခံပါဘူး..
ဖော်ပြပါ အချက်တွေကတော့ AK Taze ရဲ့ ဆိုဒ်က ဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့လိုလုပ်သွားတဲ့ မဖြူမာထွန်း နှင့် မဖြိူးမြတ်သန္တာမြင့် တို့ရဲ့ လိမ်ညာ သွားပြီး ပိုက်ဆံတွေနဲ့ တိုင်းတပါးမှာ ပျော်မြူးနေကြပုံတွေပါ။ အင်္က္ကုကားမှ လူတစ်ဦး သိန်းပေါင်း ၄၀ နှုန်းဖြင့် အယောက် ၇၀ အား လိမ်ယူသွားကြောင်းနှင့် ရွာပေါင်း ၃၊၄ ရွာခန့်ပါသွားကြောင်းသိရပါသည်။နတ်ဆိုးလေး ပိုစ့် အရေအတွက် ပြည့်သွားပြီဖြစ်ပေမဲ့ သတင်းဦးမို့လို့ တင်လိုက်ရတာပါ ။ ခွင့်လွှတ်နော်သဂျီး။ခွေးတော့မလွှတ်လိုက်ပါနဲ့ ။ခွင့်လွှတ်ခိုင်းတာပါ။
စာလေးတွေတော့ထည့်ပေးတာဘဲ ဘာလို့ ပုံက အံလိုတွေပေါ်လာလဲမသိဘူး ။သဂျီး ပြင်ပေးပါအုံး သူများတွေလို တခုခြင်းပေါ်ခြင်ပါတယ်။ လုပ်ပေးပါအုံး ဂျ။ ပုံမှာ စာတွေလဲပါ ပါတယ် ။ဒါပေမဲ့ ပုံမှာ ဒေါက်မှ မြင်ရတာ။ သူဂျီး ပြင်လို့ရရင်ပြင်ပေးပါဂျ
ဒီသတင်းကမဟုတ်မမှန်လုပ်ကြံပြီး စော်စော်ကားကားရေးထားတာဘဲဗျ ကျွန်တော်phyoe Myat thandar Myint ကိုကောင်းကောင်းသိတယ် ဒီလိုမျိူးနိုင်ငံခြားကို သွားဘို့လူတွေပို့ပေးတာ ခေါ်တာတွေလုးံဝမလုပ်ပါဘူး သူမဘာသာအေးအေးဆေးဆေးကျောင်းတက်ပြီး အချိန်ပိုင်းအလုပ်လုပ်နေတာပါ ဘယ်မှာပိုက်ဆံသုန်းဖြုန်းနေမှာလဲ ကျောင်းလခ မလောက်လို့ဘဲပိုက်ဆံချေးနေရတာ ဂျပန်မှာသူမကိုသိတဲ့လူတိုင်းကဒီသတင်းမမှန်ဘူးဆိုတာသိကြပါတယ် သူမက၂၀၀၃ခုနှစ်ကတည်းက ဂျပန်ရောက်ပါတယ် ရောက်ကတည်းကအလုပ်လုပ်ပါတယ် ယနေ့ထိတိုင်ပါဘဲ တစ်ရက်မှာ၁၂နာရီ အလုပ်လုပ်နေတာနော် တစ်ပတ်မှတစ်ရက်ဘဲနားရတယ် ယခုလိုသူမကိုစော်ကားတဲ့သတင်းကတော့ သူမရဲ့ဦးလေးတွေကိုစော်ကားလို့ ဝင်ပါရာကနေ ယခုလိုမဟုတ်မမှန်တဲ့သတင်းပါလာတယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်ပြီးသဘောပေါက်ပါတယ် တော်တော်ကိုအောက်တန်းကျကျပါပေတယ်
အော်…ဒါတောင် ၀ံကြီး တူမအဆင့်လောက်ပဲရှိသေးတယ်နော်…
ပုံမှာစာထည့်ရင်..စာမြင်ချင်ရင်… Caption အကွက်ထဲမှာထည့်ရမှာပါ..
ငွေရှိသူဌေးမ ကြော်ငြာဝင်နေတာလားဟင်င်င်…။ :?
ဟုတ်ပါတယ် မတရားရတဲ့ ငွေတွေ သုံးဖြုန်းနေကြတဲ့ပုံတွေပါ နိုင်ငံခြားသွားဟယ်၊ဈေးတွေဝယ်ဟယ်နဲ့ လုပ်နေကြတာပါ။ သူတို့ပုံတွေ မြင်ဘူးအောင်လို့ ရှာထည့်ပေးလိုက်တာပါ ဂျီး။သူတို့ပြုံးနေတဲ့ အချိန်မှာ နယ်က ရွာက လူတွေ အခုထိ သိန်းလေးဆယ်ကြောင့် ဘဝပျက်နေတဲ့လူတွေ ရှိပါတယ်။ ဒူဘိုင်း အထည်ချုပ် စက်ရုံမှာ အလုပ်ရမယ်ဆိုပြီး လိမ်ယူသွားပါတယ်။ တဦးကို သိန်းလေးဆယ် ရွာ သုံးရွာက လူ ခုနှစ်ဆယ် 40×70=2800 သိန်းပေါင်း နှစ်ထောင့်ရှစ်ရာပါ။ ဒါတောင် အကြမ်းဖြင်း သိရတဲ့လူစာရင်းဘဲရှိပါသေးတယ်။ ဝန်ကြီးတူမ လုပ်စားသွားတာပါ။ ဦးထွန်းမြင့်၊ဦးဝင်းမြင့်၊ဦးတင်မြင့် အဲ့ဒီ ညီအကို တွေက တမျိုးဆီ လုပ်စားနေကြတာပါ။
ကိုနတ်ဆိုး တော်တော်ဆိုးတဲ့နတ်ဘဲ သူများအကြောင်းမသိဘဲနဲ့ရေး ကျွန်မကတန်ဆည် အင်ကုကား ကပါ သူတို့တမိသားစုလုးံကိုသိတာပေါ့ ခများတို့ရေးသလိုတော့လုးံဝမဟုတ်တာအမှန်ပါဘဲ အလွန်သဘောကောင်းသောမိသားစုပါ စေတနာလဲအရမ်းကောင်းပါတယ် ဦးထွန်မြင့်,ဦးဝင်းမြင့်,ဦးတင်မြင့် သူတို့ညီအကိုတွေကြိုးစားခဲ့လို့ ကျမတုိ့တန့်ဆည် ယခုလို မီးတွေရ ဖုန်းတွေရ တာပေါ့ မချီးကျူးချင်နေပါ မကဲ့ရဲ့ပါနဲ့ ဗုဒဘာသာလူမျိူးတွေဖြစ်ပြီး အဲ့လောက်မဟုတ်တန်းတရားတွေပြောကြတယ်နော် ခများတို့ဝဋ်လိုက်မှာမကြောက်ကြဘူးလား ဒီခေတ်ကြီးထဲမှာဒီလောက် ကဒ်ဆိုးတွေဖြစ်နေတာနော် ဘာသာရေးလဲသတိရကပြပါအုန်း
ak taze says:
အကုင်္က္ကား တောင်စာလုံးပေါင်းမမှန်ဘဲ အင်ကုကားလို့ရေးတတ်တဲ့ ဒေါ်ကေသီရဲ့ စကားလုံးတွေဟာ အရိုးဝါးလိုက်ရလို့ ထွေပြားသွားမှန်သိသာပါတယ်ဗျာ..။
(Phyumar Tun နယ်ကိုကောင်းအောင်အဆင့်တန်းမှီအောင်ဘယ်မိသားစုကခေါင်းကောင်းပြီး၊စဉ်းစားပြီးလုပ်ခဲ့တာလဲဆိုတာအရင်ဆုံးကြိုးစားပြီးလေ့လာပါ။နေက်ပြီးအိပ်ထဲထည့်ခဲ့တဲ့လူနဲ့ အိပ်ထဲမထည့်လူကိုခွဲခြားလေ့လာဖို့လဲလိုအပ်တယ်။အထူးသဖြင့် သူတို့တွေရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုအသေးစိတ်သိရအောင်လေ့လာကြပါ။ မျိုးရိုးစဉ်ဆက်လေ့လာလိုရပါသည်) ဒါက ဝန်ကြီးတူမ ဖြူမာထွန်း ပြောတဲ့ စကားပါ။
(Phyoemyat Thandar Myint ဖြူမာရေ ဦးနှောက်မရှိတဲ့ဟာတွေကို သွားပြောမနေနဲ့တော့ နားလဲမှာမဟုတ်ဘူး) ဒါက လဲ ထိုနည်း၎င်းပါ။
(Ak Taze ဒေါ်ဖြူမာ မျိုးရိုးစဉ်ဆက် လိမ်ခဲတဲ့ ခင်ဗျားတိုရဲ့ ကျော်မင်းမျိုးဆက် ဖွတ်နဂါးကို တန့်ဆည် တနယ်လုံးက နွေးထွေးစွာအကြွေးတောင်းဖို့စောင့်ကြိုနေကြပါတယ် ဒေါ်ဖြူမာ ..။ငွေကပ်လို့ လူရုပ်ပေါ်တာ ခွေးရုပ်မပျောက်ပါ ။တန့်ဆည်သူတန့်ဆည်သား လူအရှားသွားပြီ အရင်လိုထင်သလိုလိမ်လိုမရတော့ပါ..။ငွေအဆင်ပြေရင် အကြွေးဆပ်ဖို့တန့်ဆည်ကို တခေါက်လောက် ဆက်ဆက်လာခဲ့ပါဖြူမာ..။အိမ်ကုပ်ကလေးနဲ့ အုန်းခြံကြားက စက်စုတ်ကလေးလဲ အကြွေးရှင် သခင်ကိုမျော်နေရင်းနဲ့အခွန်မကြေးလို့ ဒေ၀ါလီခံရင်း အံတင်းစောင့်နေရတာ နှစ်ပေါင်းများစွာကြာခဲ့ပါပြီ မဖြူမာ ဆပ်နိုင်တဲ့တနေ့ အားမာန် အပြည်နဲ့ ကြိုးစားလည်ပတ် အကြွေးဆပ်ဖို့ အုန်းခြံခြေရင်း ခြုံဗုတ်အတွင်းက သခင်(အကြွေးရှင်းများ)ပြန်အလာ ကျိုးနွံ့စွာဖြင့် စောင့်နေပါတယ် မဖြူမာ .။ ပုံ …တန့်ဆည်သား (အကြွေးရ၇န်ရှိသူများ)) ဒါကတော့ AK taze ရဲ့ မျိုးရိုးစဉ်ဆက်အကြောင်းပြောထားတာပါ။ စုံစမ်းလို့ ရပါတယ်။ ဒီသတင်းအတွက် ထောက်ခံမယ်သူတွေလဲ ရှိပါတယ်။ မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။
(Ak Taze တင်းတိန်ယံမှာ အခြေနေမကောင်း အကြွေးရှင်တွေ လိုက်တောင်းလို့ အကုင်္က္ကားကိုပြောင်းခဲ့တဲ့ နင့်အဖိုးရဲ့သမိုင်းငါတို့ကောင်းကောင်းသိခဲ့ပါတယ်မိဖြူမာ ဒေါင်ကြီးနဲ့ကျွန်းတောကုန်းမှာ လိမ်ထုတ်ခဲ့ပြီး စက်တွေတည်တိုက်တွေဆောက် လူရုပ်ပေါက်အောင် ခွေးရုပ်ပျောက်ဖို့ ဟန်လုပ်ခဲ့တဲ့နင့်အဖိုးကို ငါမမေ့သေးပါဘူးမိဖြူမာ…..ဖြူမာရေ နင့်တို့ကဆိုင်ကယ်ကိုစီးကျောင်းကြီးတက်တဲ့ အချိန်မှာ ကန်သင်းရိုးကြား ရိုးပြတ်များကိုဖိနပ်မပါခြေဗလာနဲ့ ပုဆိုးစွန်တောင်လူရုပ်မပြောင်တဲ့အောက်ခြေတန်းစား တို့များ ဘ၀ကို မြင်ကြည့်စမ်းပါမိဖြူမာ….။ငါ့သမီးလေး ဒူဘိုင်းရောက်ဖို့အရေး နင့်ရှာခိုင်းတဲ့ သိန်းလေးဆယ်တွက် ကုန်းပေါင်လယ်ရောင်း ငွေတိုးတောင်းပြီး ငါ့ပေးခဲ့တယ်မိဖြူမာ..။ရန်ကုန်ခေါ်သွား တိုက်ခန်းထားပြီး သင်တန်းကြေးတောင်း ငွေရှစ်သောင်းဆိုလို့ ငါ့ထပ်ဆောင်းပေးခဲ့ရတယ်ဖြူမာရေ…..ဒူဘိုင်းမရောက် ငုတ်တုတ်စောင့်ရင်း ရွာပြန်ခဲ့တဲ့ ငါ့သမီးအား ရွာသူရွာသား ပျက်လုံးတွေကြား စိုးရွံ့အားငယ် လူဘုံလယ်မှာ ခေါင်းမဖေါ်ရဲအောင် နင်လုပ်ရက်တယ် မိဖြူမာ…။တော်သေးသပ မိဖြူမာ သိန်းလေးဆယ်သုံး လူကုန်ကူးဖို့ နင့်ရဲ့အကြံ ငါတို့အမြန်သိလို့ သမီးမရှုံး ငွေဆုံးသော်လည်း သမီးကညာ ရွာရောက်လာလို့ ကျေးဇူးတင်တယ် မိဖြူမာ….။ တောသူတောင်သား ငါတိုများတော့ စက်ပိုင်သူဌေး ကျော်မင်းမြေးဆိုပြီး ယုံစားလို့အပ်နှံ ဖာမခံခဲ့ရတဲ့ ငါ့သမီးလို နင်တုိ့မဖြစ်ပါစေနဲ့လို့ ငါဆုတောင်းနေတယ်….မိဖြူမာ ။ “ သမိုင်းဆိုတာ မေ့ကောင်း တဲ့အရာ မဟုတ်ဘူးလို့“နင်ပြောခဲ့လို့ နင်တိုရဲ့သမိုင်းရိုင်းခဲ့တယ်ဆိုတာတန့််ဆည်မက မြန်မာသိအောင် တစ်စွန်းတစ ဖော်ပြလိုက်ပါတယ် …မိဖြူမာ..။ ပုံ ….ဒူဘိုင်းမရောက်သမီးရှင်.. သမိုင်းကြောင်းများ ဆက်ရန်ရှိပါသေးသည်…။) ဒါကတော့ ဖြူမာ တို့ရဲ့ ရာဇဝင်ပါ ။ ဦးဝင်းမြင့် အကို ဦးထွန်းမြင့် သမီးပါ။ ဝန်ကြီးတူမ တွေပေါ့ ။အားကိုးခိုင်နေတာကိုး။
ကိုကြီးမိုက်ကြီး ရှင်းသွားပြီထင်ပါတယ်။ ကြံ့ဖွတ်တွေ NLD လူငယ်တွေကို ခြိမ်းခြောက်ကုန်ပြီဗျို့ ဆိုတဲ့ ပိုစ့် ကို ဖတ်ရင် ရှင်းသွားပါလိမ့်မယ်။ အဲ့ဒီကိစ္စ ရဲ့ နောက်ဆက်တွဲ ဝန်ကြီးတူမ တွေနဲ့ ပြောထားတဲ့ ဟာတွေပါ။ နည်းနည်းများသွားတယ်နဲ့တူတယ်။ ဆောရီးပါ။ နတ်ဆိုးလေး
့AK Taze ဆိုတဲ့ ဖေ့ဘွတ်မှာ လဲ သွားရောက် ဖတ်ရှု့ နိုင်ပါဂျောင်း။
ကိုရေး ချင် says:
ကိုနတ်ဆိုးရေ ကျွန်တော်ကတော့ ဘယ်သူ့ဘက်မှ မလိုက်ချင်ဘူး။ ကျွန်တော့် အမြင်ပြောရရင်တော့ တန့်ဆည်သားများ တော်တော်ပြောနိုင်တာပဲဗျ။ မိန်ကလေးနဲ့ကို ဘာမှပြန်မလှုပ်နိုင်အောင် ပြောထားတယ် ဟားဟ… ကျွန်တော်ကတော့ အဲလောက် မပြောသင့်ဘူး ထင်တယ်လေ။ ဟိုက ဘာမှတောင် မပြောရသေးဘူး သူပြောတာက ဘာတဲ့ ( ၀င်းမြင့်တူမ ဂွကျကျ ဖြူမာထွန်းသို့ ရည်ညွှန်းပါသည်..။ ) အော် ကလေးကလား ဆန်လွန်းတယ်ဗျာ။ ကျွန်တော့် အမြင်ပြောတာနော် ဝေဖန်ခွင့် ရှိတယ်ထင်လို့ပါ။ ဘယ်သူ့ဘက်မှ မလိုက်ပါဘူး။ ပြီးတော့ ပြောသေးတယ် ဘာတဲ့ ( ဒ်ါဖြူမာ ကျွန်တော်ကို ခင်းဗျားကြိက်သလောက် စော်ကားချင်းစော်ကားပါ အမေနဲ့ nld ပါတီ ကိုတော့ စော်ကားမော်ကားမလုပ်ပါနဲ့ ကျွန်တော် လုံးဝသည်းမခံပါဘူး..) အဲဒါလည်း မဆိုင်ဘူး ဟိုက ဘာမှ NLD & အမေစု ဘာတစ်ခွန်းမှ မပြောဘူးနော်။ လုပ်စားလုပ်တာပြောပါတယ်။ ခုချိန်မှာ အဲဒါတွေ ခက်တယ်ဗျ ဘာဖြစ်ဖြစ် ပွဲဆူအောင်တော့ တို့အမေစုနဲ့ စွလိုက်တာပဲ။ တကယ် အမေစုကို လေးစားတယ်ဆိုရင် ဒါမျိုးတွေ မလုပ်သင့်ဘူးဗျာ။ အမေစု ကြားရင်လည်း ဝမ်းနည်းမိမှာပဲ။ ကျွန်တော်တို့လို ကြားလူတောင် ဖတ်ရတာ စွတဲ့ စကားမှန်းသိသာတယ်။ အင်း ကိုရွှေတန့်ဆည်သားများ ကိုယ့်ကိုယ်ကို တန်ဖိုးထားဖို့ ကောင်းပါတယ်။ ယောင်္ကျားကွ!!! အော်.. . . ယောင်္ကျားပါဆို ဆိုတာလို ဖြစ်နေပီ။ ကျွန်တော် ကြားဖူးသော တန့်ဆည်သားများ သတ္တိကောင်းတယ် ရဲရင့်တယ် စစ်သားတော်တော် ထွက်တယ်လို့ ကြားဖူးတယ်ခင်ဗျ။ အင်းခုတော့ မိန်းကလေးတွေနဲ့ အင်း ရဲရဲဝံ့ဝံ့ကို လူမမြင် သူမမြင် တိုက်ပွဲ ဆင်နွှဲနေပါလား……….
ဟုတ်ပဗျာ ခုတော့ ကျုပ်တို့တန့်ဆည်သားတွေ သိက္ခာကျတယ်။ ဖြစ်စဉ်ကလည်း အဲလိုမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဗျာ။ ခုလိုပြောလို့ ကျွန်တော်က သူတို့ ဘက်တော်သား မဟုတ်ဖူးနော်။ ကျွန်တော် ကြားတာ ပြောပြတာပါ။ အဲဒီတုန်းက ဦးတင်မြင့်နဲ့ ဦးမြင့်ထွန်း ဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာ ဆုံသတဲ့ဗျား။ အဲဒီအချိန်မှာ ဦးမြင့်ထွန်းက လှမ်းရိရာက စကားအချေအတင် ဖြစ်သတဲ့။ ကျွန်တော် ကြားတာကတော့ ဦးမြင့်ထွန်းက နဲနဲလွန်ဆိုပဲ လမ်းဆုံမှာ ပြောနေကြတာလေ…. နောက်နေ့ သွားတောင်းတယ်တဲ့ မှားပါတယ်ဆိုပီး… ဒီသတင်းတင်တာလည်း သူတို့ မသိတဲ့ အကြောင်းပေါ့…. ဒီလောက်ပါပဲဗျာ သိရသလောက်ရေးခြင်း ဖြစ်ပါသည်…. ကျွန်တော်တို့ တန့်ဆည်ဆိုတာ မြို့မဟုတ်တောမဟုတ်ဆိုတော့ သတင်းအမှား ကြီး အင်တာနက်ပေါ်တက်လည်း ဘယ်သူမှ ပြင်နိုင်တာ မဟုတ်ဖူးလေ အဲဒါကြောင့် သတင်းပေးခြင်း ဖြစ်ပါသည်… မည်သူ့ကိုမျှ ထိခိုက်နစ်နာ စေရန် မရည်ရွယ်ပါကြောင်း…….
”Phyoemyat Thandar Myintးး NLD အမည်ခံထားတဲ့နိုင်ငံရေးသမား အတုအယောင်တွေ ” ဒါကဘယ်သူတွေကိုစော်ကားထားတဲ့ စကားက ပါတီ တစ်ခုလုံးစော်ကားထားတာ မဟုတ်ဘူးလားဗျ ..။ကိုရေးချင် နဲ့ cherry oo ၊y kk ၊တို့ခင်းဗျာ ကျွန်နုပ် ak taze လူမမြင် ၊သူမမြင် လှုပ်ရှားနေတာ မဟုတ်ပါဘူး facebook မှာကျွန်ုပ် ပုံများတင်ထားပါတယ် ခင်ဗျား ..။အခုတင်ထားတဲ့ဟာတွေက တကယ်အဖြစ်အပျက်တွေပါ ခင်ဗျား..။အခုလောလောဆယ် မန္တလေးမှာနေတဲ့ မသင်း ၊မနှင်း ညီအမနှစ်ယောက်ရဲ့ဇာတိက ချောင်းဆုံကျေးရွာကပါ..။ဒူဘိုင်း မရောက်လို့ ရွာမပြန်ရဲဘဲ မန္တလေးမှာ ဈေးရောင်စားနေရပါတယ်..။အကုင်္က္ကားရွာ သဇင်ဝင်း ကဖေးမှ သမက်နှစ်ယောက်လဲ ဂျပန်မရောက်ပဲ အလိမ်ခံရတဲ့ အကြောင်းမေးမြန်းစုံစမ်းနိုင်ပါသည်.။နောက်အလိမ်ခံရသူများ စုပေါင်း၍ ဥပဒေ အရ အရေးယူဆောင်ရွက်ရန် ကြိုးပမ်းလျှက်ရှိကြောင်း သတင်းရရှိပါသည် ။ကိုနတ်ဆိုးလေး ခင်ဗျား အမှန်တရားဟာ ဘယ်သောအခါမှဖြောက်မရနိုင်ပါဘူး..။
တန့်ဆည်သားပါ..။ဘယ်သူမှ ထိခိုက်လို့သောဆန္ဒမရှိပါ ခင်ဗျား..။ဘ၀ပျက်သွားသော မိသားစုများ၏ ကိုယ်စား ခံစား၍တင်ပြပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်.။အမှန်တရား အတွက်ကိုယ့်ဘ၀ပျက်သွားသည့်တိုင် နောက်ဆုတ်မည် မဟုတ်ပါ..။
facebook တွင်လာရောက်ကြည့်ရူ နိုင်ပါဂျောင်းးးးးးးးးးးး
ဘာတွေလဲဝေ့ …..။ ရှုပ်ကိုရှုပ်တယ်…။ တစ်သက်လုံးဖုံးလာသမျှ ကုန်းကာမှပေါ်ဆိုတာမျိုးတော့ ဖြစ်ကုန်ပြီနဲ့တူရဲ့….။ အဲဒိမြို့ကိုရောက်ဖူးတယ်ဗျ…။ ခဏပဲ….။ 1993 လောက်က လမ်းဆုံမှာ အရက်သောက်ဖို့ မြို့ထဲကနေ နှစ်မိုင်လောက်လမ်းလျှောက်ရတာ မစားသာဖူး…။ မြို့နဲ့ ကားဆိပ်နဲ့က နှစ်မိုင်လောက်ဝေးတာ…။
အခုတော့ အရမ်းကို တိုးတက်နေပြီဗျ ရန်ကုန် တန့်ဆည် တိုက်ရိုက် လေအိတ်တွေလဲ ပြေးနေတယ်။ အိမ်ကွက်တွေကလဲခေါင်ခိုက်နေတယ် ။ လမ်းဆုံ မြို့လယ်ဆို ၁ ပေ သိန်း ၄၀ ရှိတယ်။ တန့်ဆည်မြို့ ဆိုပေမဲ့ လမ်းဆုံ ကဘဲ မြို့ ဖြစ်နေတော့တာပါ။ တန့်ဆည်က ရွာကြီး သာသာလောက်ပါဘဲ။
ဒါပေမယ့် ရုံးတွေက မြို့ထဲမှာပဲရှိတယ်လေ…။ စုပေါင်းရုံးကောရှိသေးလား နတ်ဆိုးလေးရဲ့…။
shwe amm says:
ကိုနတ်ဆိုးရေ.ကျွန်တော်လည်းအမှန်တရားကိုပြောပါရစေ phyoe Myat thandar myint ကငွေတွေလိမ်ပြီးနိုင်ငံခြားမှာ shopping တွေထွက်နေဆိုတာ လုးံဝကိုမဟုတ်မမှန်ပါဘူးဗျာ ကျွန်တော်ဒို့နဲ့ဂျပန်မှာကျောင်းတက်ရင်းနဲ့အလုပ်လုပ်နေတာပါ ဒူဗိုင်းဆိုတာ သူခများဘာမှမဆက်စပ်တဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံပါ သူမမှာသူ့ကျောင်းစရိတ်သူရှာနေတာကျွန်တော်မျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ပါဘဲ ပြီးတော့လဲယခုထိတိုင်ဂျပန်မှာနေထိုင်ဆဲပါ 2003 ခုနှစ်ကတည်းကသူမဂျပန်ကိုကျောင်းတက်ဘို့ရောက်လာပါတယ် သူမကိုသူမလဲဝန်ကြီးတူမပါလို့မပြောဘူးပါဘူးခများ ဒီသတင်းကိုဖတ်ကြည့်တော့မှဘဲသိရပါတယ် တကယ်တော့သူဘဝသူရိုး၂သား၂ နေထိုင်နေတာကို ယခုလိုမမှန်ကန်တဲ့သတင်းတွေမထည့်သင့်ပါဘူးလို့ထင်ပါတယ် လူသားခြင်းကိုယ်ခြင်းစာနာ၍ယခုလိုရေးရပါတယ်
ကျွန်မဟာ NLD ပါတီဝင်တယောက်ပါ ကျွန်မလဲဂျပန်နိုင်ငံမှာနေထိုင်ပါတယ် ဒီကလေးမနှစ်ယောက်ကို ကျွန်မကောင်း၂သိပါတယ် အလုပ်မှာအတူ၂လုပ်ဘူးပါတယ် ဒီလေးမလေးတွေကရိုးရိုးသားသားလေးတွေပါဘဲ အပေါ်မှာရေးထားဒါနဲ့တော့တခြားဆီပါဘဲ သူများအကြောင်းတွေကိုသေသေချာချာမသိဘဲယခုလိုရေးတာတော့မကောင်းပါဘူး ကျွန်မဒို့နိုင်ငံကလူတော်တော်များများဟာ မကောင်းမြင်ဝါဒ အရမ်းများပါတယ် ဒီမိုကရေစီ ဆိုတာအဲလိုစိတ်ဓာတ်မျိူးမဟုတ်ဘူးရှင့် လွတ်လပ်တာမှန်တယ် သူများအတင်းပြောဘို့မဟုတ်ဘူး နိုင်ငံကိုကောင်းအောင်ဘယ်လိုလုပ်မယ် ပညာမသင်နိုင်တဲ့ကလေးတွေအတွက် ဘယ်လိုလုပ်ကြမယ် ဆိုတာတွေအများကြီးဘဲစဉ်းစားပါ တနိုင်ငံတည်းသားတွေစည်းလုးံပါ ဒေါ်စုပြောတာလဲဒီစကားတွေပါဘဲ အဓိကကိုသိစေချင်ပါတယ် ကျွန်မဒို့နိုင်ငံခြားမှာဘယ်လောက်အောက်တန်းကျစွာနေရတယ်ဆိုတာသိကြမှာဘာ ကျွန်မကတော့ကိုယ်နိုင်ငံကိုတိုးတက်စေချင်ပါတယ် ဒီလိုမျိူးတစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်မကောင်းပြောနေမယ်ဆိုရင်ဘယ်မှာတိုးတက်နိုင်ပါ့မလဲရှင် ကျွန်မကဒေါ်စုကိုအရမ်းလေးစားတဲ့သူတစ်ယောက်ပါ ဒါကြောင့်ဒေါ်စုရဲ့ကောင်းတာတွေကိုအတုယူတယ် ကျွန်မကိုဆရာလုပ်တယ်လို့တော့မထင်စေချင်ပါ နိုင်ငံနဲ့ပြည်သူတွေကိုချစ်သောသူတစ်ယောက်ပါ နိုင်ငံတိုးတက်ချင်ရင် ဒေါ်စုတစ်ယောက်တည်ထောင်လို့မရပါဘူး ဒေါ်စုလိုလူမျိူးတွေအများကြီးရှိမှရမှာပါ
ဓါတ်ပုံတွေက.. ရေးတဲ့သတင်းနဲ့ဘာမှမဆိုင်တဲ့..အလှ/အမှတ်တရ ပုံတွေဖြစ်နေပါတယ်..။
အဲဒါ.. ကာယကံရှင်က..ဆယ်ရီဘရိတ်တီလည်း ဟုတ်ပုံမရပါဘူး..
ဆိုတော့.. ကန့်ကွက်ရင်.. ဖျက်မှာဖြစ်ပါတယ်နော..
ဒီလိုမျိူး လိမ်လည်မှုမရှိဘဲနဲ့ သူတပါးအားသက်သက်နာမည်ဖျက်တဲ့ သတင်းမျိူးမတင်သင့်ဘူးလို့ထင်ပါတယ် ပြီးတော့ဒီမိန်းကလေးတွေက နာမည်ကြီးတွေလဲမဟုတ်တော့ ဒီလိုသတင်းမဟုတ်တဲ့သတင်းမတင်သင့်ဘူးလို့ထင်ပါတယ် သတင်းဆရာများကလဲသတင်းရေးမယ်ဆိုရင် မှန်တယ်မမှန်ဘူးဆိုတာသေချာလေ့လာသင့်ပါတယ်ဗျာ ဒီလိုမဟုတ်မမှန်တဲ့သတင်းတွေတင်လို့ရတယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်လဲတင်ချင်ပါတယ် ကျွန်တော်နဲ့မတဲ့သူတွေအကြောင်းပေါ့
ကိုနတ်ဆိုး က အရက်သောက်ပြီး အရက်မူးမှ သတင်းရေးတယ်ထင်တယ်
ဟုတ်ကဲ့ နတ်ဆိုးလေး ခရီးလွန်နေလို့ပါ အခုမှ ဝင်ကြည့်ဖြစ်တာပါ။ ဒီသတင်းနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး၊ သူတို့တွေ ဒီလိုလုပ်တယ်ဆိုတာနဲ့ ပက်သက်ပြီး အားလုံးကို တာဝန်ယူနိုင်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ နတ်ဆိုးလေး ကိုယ်တိုင်ကလဲ အဲ့ဒီနယ်သား စစ်ိစစ်ပါဗျာ။ သူတို့ အကြောင်းတွေ အားလုံးသိတယ်။ ပြီးတော့ နတ်ဆိုးလေး လုပ်ကြံတင်တာမဟုတ်ပါဘူး သူဂျီးရေ AK Taze ဆိုပြီး ဖေ့ဘုတ်မှာ ရှာလိုက်ပါ တွေ့ပါလိမ့်မယ်။ သူတို့ ပြောထားတဲ့ဟာတွေ့ပါ။ သူတို့ ဒီလိုလုပ်ခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးလို့ ဘယ်သူအာမခံလဲ ။ သူဂျီး ကျွန်တော် ရဲရဲ ဝင့်ဝင့် ရင်ဆိုင်ရဲတယ်။ အာမခံပြီ ငြင်းချင်ကြလား y kk ရယ် shwe amm ရယ်ကိုပြောတာပါ။ တကယ်လို့ လုပ်ခဲ့တာ အမှန်ဆိုရင် သူတုိ့လိမ်သွားတဲ့ ငွေတွေကြောင့် ဘဝပျက်နေတဲ့ ရွာသူရွာသားတွေကို ခင်ဗျားတို့ တာဝန်ယူပြီး ပြန်ဆပ်ပေးမလား။ တကယ်လို့ ဒီသတင်းမမှန်ရင် သူကြီးရဲ့ ပွိုင့်မပြောနဲ့(သူဂျီးကိုလေးစားပါတယ် နတ်ဆိုလေး ရိုင်းသွားရင် ခွင့်လွှတ်ပါ) နတ်ဆိုးလေး ထောင်ကျခံနိုင်ပါတယ်။ အပေါ်က ကွန်မန့် ပေးထားတဲ့ သူတွေက ဘယ်ကသတင်းးရပြီး ရွာသားအဖြစ် ဝင်ရောက်ခဲ့ကြတာလဲ။ပြီးတော့ စစချင်း ဒီကွန်မန့်ဘဲ ပေးထားတယ်နော် ။ စပိုင်တော့မဟုတ်လောက်ပါဘူး။ အာလုံးကို တာဝန်ယူနိုင်ပါတယ်။
အင်း ဝန်ကြီးတူမ များဘက်က လိုက်ထားကြတာကတော့ ရွာသား အသစ်ကလေးတွေကြီးပါဘဲလား။ ကေသီ ရေ ပိတောက်ဝါ ဆိုင်ရှေ့က နိုင်ငံတော်ပိုင်တဲ့ မြေကွက်ကြီး တကယ့် ကို သိန်းထောင်ချီတန်တဲ့ မြေကွက်ကြီးကို ခင်ဗျားရဲ့ သဘောကောင်းပါတယ်ဆိုတဲ့ဝန်ကြီး အာဏာ နဲ့ ဘယ်လိုဘယ်ပုံ ယူသွားတယ်ဆိုတာတော့ ခင်ဗျားသိပါတယ်နော်။ ပြီးတော့ ဖုန်းတွေ ရခဲ့ပါတယ် ။ ပိုက်ဆံ တွေ သိန်းချီပေးပြီး ရှစ်နှစ်လောက် သူတို့လက်ထဲ ငွေကစားပြီးမှ ဖုန်းတွေ ရခဲ့တာရော ခင်ဗျား မသိခြင်ထောင် ထောင်နေတာလား။ ခင်ဗျား အက္ကင်္ုကားက ဆိုရင်ပိုသိမှာပါ ဒီသတင်းကို။ နတ်ဆိုးလေး ရမ်းရေးနေတာ မဟုတ်ပါဘူး။ အပုတ်ချနေတာလဲ မဟုတ်ပါဘူး။ ခင်ဗျားတို့ ကောင်းပါတယ်ဆို့တဲ့ကောင် တွေလုပ်သွားတာကိုပြောနေတာပါ။ အားလုံးကို တာဝန်ခံနိုင်ပါတယ်။ သူဂျီး အမှန်တင်တဲ့ သတင်းတွေကိုရော ကန့်ကွက်ပြီးဖျက်ခိုင်းရင် ပွိုင့်နုတ်မှာဘဲလား။ ဒါဆိုကျွန်တော်က ခိုင်လုံအောင် သတ်သေပြနိုင်ရင်ရော ပွိုင့် ဘယ်လောက်တိုးပေးမလဲ ။ မန္တလေးက ၃၅လမ်း၊ ၉၅ လမ်း လား ၉၄ လမ်းမှာလား မသိဘူး ဆပ်ပြာစက်ရုံ ရှိပါတယ်။ အဲ့နားမှာ မသင်းတို့ မနှင်းတို့ ညီအမ နှစ်ယောက် ဈေးရောင်းနေကြပါတယ်။ သူတို့ ကိုယ့်တိုင် လိမ်ခံရတဲ့ အထဲမှာ ပါခဲ့ကြပါတယ်။ မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။တန့်ဆည်က မသင်းတို့ မနှင်းတို့ ညီအမလို့ မေးရင် သိပါတယ်။ ကျောက်ဝိုင်းမှာလဲ လုပ်နေကြပါတယ်။ မေးနိုင်ပါတယ်။
ကိုနတ်ဆိုးကျွန်တော်ဘက်ကတော့တကယ်သေချာမှန်ကန်ပါတယ် သူမဂျပန်ရောက်တည်းကအလုပ်လုပ်ကိုင်လာတဲ့ အလုပ်ကရတဲ့လစာတွေဘဏ်ကစာရင်းစာအုပ်မှာအားလုးံရှိနေပါတယ် ပြီးတော့လုပ်ခဲ့တဲ့အလုပ်တွေမှာလဲစာရင်းတွေရှိပါတယ် ခင်များဒို့ပြောတဲ့မသင်းမနှင်းညီအမနှစ်ယောက်ကိုမေးကြည့်ပါ phyoemyatthandarmyint လိမ်တာရောဟုတ်ရဲ့လားလို့ သူ့ဦးလေးတွေအကြောင်းရေးလို့ဝင်ပါရာကနေ ယခုလိုမဟုတ်မမှန်လုပ်ကြံရေးတယ်ဆိုတာ သိသာလှပါတယ်
အော် … ရွာထဲ့မှာလဲဖွတဲ့သူတွေနဲ့ကန့်ကွက်တဲ့သူတွေနဲ့